JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၅) ဒေသတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
နိုင်ဝင်ဘာ (၈) ကြာသာပတေး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၅) လက်အောက် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၅) ဒေသဖြစ်သော ၀၀မ်ကျေးရွာအနီးတွင် နိုဝင်ဘာ (၇) ရက် နေ့လည်ပိုင်း (၂း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခလရ (၁၄၁) တို့ ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှာ (၇) ဦးသေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လွန်ခဲ့သော အပါတ်တွင်လည်း ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့်ဒေသ တွင် ဗမာစစ်အစိုးရ စစ်တပ်အခြင်းခြင်း (၁၂၀မမ) လက်နက်ကြီးများဖြင့် မှားယွင်းပစ်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဤသို့အခြင်းခြင်းမှားယွင်းကြောင့် ဗမာစစ်သား အများအပြား သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သေဆုံး ဒဏ်ရာရရှိသော ဗမာအစိုးရ စစ်သားများကို မြစ်ကြီးနား ဆေးရုံသို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ၄၊၅ ခါ သယ်ယူခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် အချင်းချင်းမကြာခဏမှားယွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ဗမာအစိုးရမှ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ စစ်အင်းအား အများအပြားပို့ဆောင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ တပ်ရင်းတစ်ရင်းနှင့် တစ်ရင်းမှတ်မိခြင်း မရှိသောကြောင့် မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု မကြာခဏဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(7) Burmese soldiers killed in Wa Wang village, which is under KIA (5) battalion, KIA (5) Brigade area, on 7th November, according to the KIA front-line officer report. At 02:00 noon on that day, there was severely battle between Burmese Government light infantry unit (141) and KIA (5) battalion in Wa Wang village.
Last week, there was wrong firing with 120 MM artillery weapon between the same Burmese Government troops. On that incident, many Burmese soldiers died and wounded. And the wounded soldiers were transferred5times with military helicopter. It is happened often because there are many Burmese government troops in the KIA’s area and they don’t recognize each other.
KARAIKASANG gaw anhte wunpawng amyu sha ni hpe kade ram tsawra ngu ai gaw ndai mabyin ni hpe yu nna atsawm sha chye lu ai. Karai kasang kaw galoi mung manoi manat let shawng de shakut sa wa ga.
ngai mung wp myu tsaw share shagan ni hte ten shagu majan pa hta rau re.hkum tsang dai W P annau ni kadai si na nre,YEHOWA AUNG DAWM PADANG SHE DIP SHA NGUN NA RE.
အဓိပ္ပါယ်မရှိတာမြန်မာစစ်လောကမှာ မှားယွင်းပစ်တယ်ဆိုတာရာဇ၀င်ကိုမရှိခဲ့ ဘူး ကလေးကစားတာမှမဟုတ်တာ ကြောက်အားလန့်အားပစ်ရအောင်လဲ ဘာလက်နက်ဆန်းတွေရှိနေလို့ကြောက်ရမလဲ သတင်းမှာလဲ ဗမာစစ်သား ဘယ်လောက်ကျတယ်သေတယ်ဆိုတာတွေပဲပါတယ် kia စစ်သားတွေက မသေတဲ့အမျိုးတွေလား ... ဇာတိသွေးဇာတိမာန်တက်ကြွအောင်လုပ်တာလဲလုပ် ပေါ့ ဒါပေမယ့်သေတွင်း ထဲတော့ အတင်းတွန်းမပို့ပါနဲ့ သတင်းသမားတို့ရယ် ...
ANhte chyurum W P shani K K la ta la sai hte maren ding hpring ai hte K K shi sharawng ai lam hta tsap,teng man ai hte kangka let,amu bungli galaw ga,shingrai yang dai nhkru nhkra agung alau mahkra dang manga lu na re.dai myenni shada da shut gap sat hkat ai nga,kahtap na grau na re.HTAM SHI ALU, lagu NAWKYU JAWNG HKRUP MARA DI NAT JAHTEN ,W P mungchying shani hpe amyu myu hku zingri,myenasai myit kraw kaw nan masha myit ai hku nmyit ai majaw re.AUNG SAN KAW+UTING TSIN NGAM ai ning baw ningla ni yawngan gup ga na Teng Man ai ga nshapraw ding sang shawnglam na myen hpyen man ni shada da gap shut hkat na grau na re.